Fabrigas Oo Fariin Cajiib Ah Usoo Diray Laacibka Khadka Dhexe Ee Chelsea Mount
HomeHoryaalka IngiriiskaFabrigas oo fariin cajiib ah usoo diray laacibka khadka dhexe ee Chelsea Mount
Mount waxa uu udub dhexaad u ahaay kooxda Frank Lampard xilli ciyaareedkan, waxaana uu soo saaray baas cajiib ah oo ka baxsan difaaca Rennes kana caawiyey Callum Hudson-Odoi in oo dhaliyey goolka daqiiqadii 21aad.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England uma baahnin martiqaad labaad, madaama uu soo saaray qaab qabow oo uu hogaanka ugu dhiibay Chelsea FC.
Olivier Giroud oo bedel ku soo galay ayaa markaa dhaliyay goolkii guusha ee Chelsea FC qeybtii labaad ee ciyaarta ka dib markii Serhou Guirassy uu madax ku barbareeyay daqiiqadii 85aad.
Kooxdii martida ahayd ayaa xaqiijisatay booska 16aad ee Champions League iyadoo labo kulan ay u harsan tahay.
21 jirkaan Mount ayaa 13 kulan u saftay tartamada oo dhan kooxda Chelsea FC ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, xiddigii hore ee khadka dhexe ee Blues Fabregas ayaa si cad u la dhacsan da’yarka reer England.
Isagoo soo dhigaya Twitter ka dib markii Mount uu ku lug lahaa furitaanka Chelsea FC, Fabregas ayaa qoray: “Mason Mount. Fantastic. ”
Mount ayaa rajeynaya inuu u ciyaaro Chelsea FC marka ay ku soo laabato Premier League iyadoo la ciyaareysa kooxda reer London ee Tottenham Hotspur garoonka Stamford Bridge Axada.
Blues ayaa xooga saari doonta sidii ay guul uga gaari laheed Spurs, waxaana noqon doontaa hadii guuleysato hogaamiyaha ugu sareya horyaalka Premier League.